The Rohingya News Bank : ဒုက္ခသည်စခမ်း
Showing posts with label ဒုက္ခသည်စခမ်း. Show all posts
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွင်း အိဒ်ပွဲတော် ကျင်းပ
02 သြဂုတ်၊ 2020
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ ကုတုပလောင် ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ ဗလီမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ အိဒ်ပွဲတော် ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနား။ (သြဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၈)
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဘာသာရေး အိဒ်ပွဲတော်ကို ကိုဗစ်စည်းကမ်းချက်တွေ နဲ့အညီ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ကျင်းပပြီး ဝတ်ပြုဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မဆုမွန် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေပေမယ့်လို့ ကမ္ဘာတဝန်းက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်တွေ ဟာ အထွတ်အမြတ်ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ အိဒ်ပွဲတော်ကို ကိုဗစ်ကာလ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ ကြားကပဲ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်သိန်းချီ စုဝေးခို လှုံနေထိုင်နေကြတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဇ်ဘဇားခရိုင်က ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်း အသီးသီးမှာ လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အိဒ်ပွဲတော်ကျင်းပခွင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရနဲ့ ကမ့်ပ်အာဏာပိုင်တွေ ဘက်က ကိုဗစ်စည်းကမ်းချက် သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီ ကျင်းပခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ က ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, mm, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, အီဒ်ပွဲတော်
ရိုဟင်ဂျာစခန်းတွေမှာ မတော်မတရားပြုကျင့်မှုတွေ တိုးပွား နေဟု ကုလ ပြောကြား
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာစခန်းတွေမှာ ဒုက္ခသည်တွေ မတန်တဆများပြား ကြပ်သိပ်နေပြီး လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ရုံးရဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
စခန်းတွေမှာ နေထိုင်လျှက်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ဗြိတိန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Oxfam ကယ်ဆယ်ရေး အသင်း ချုပ်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ၂၅% ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့ဘဝတွေ လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေ ရကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ကုလ, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်ကလေး လေးသိန်းဝန်းကျင် ပညာသင် ခွင့်ဆုံးရှုံးနေ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW သတင်းစာရှင်းလင်းစဉ်
Photo: Pimuk Rak/RFA
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲက ရိုဟင်ဂျာ ကလေးငယ် လေးသိန်းလောက်ဟာ ပညာ သင်ယူခွင့် ပိတ်ပင်ခံထားရတာမို့၊ မျိုးဆက်တစ်ဆက်စာ ပညာရေးပြတ်လတ်မယ့်အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင် နေရကြောင်း လူ့အခွင့် အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, RFA Burmese, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ပညာသင်ကြားရေး, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ကုတုပလော် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဆုတောင်းပွဲကျင်းပနေသည့် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ။ (သြဂုတ် ၂၅၊ ၂၀၁၉)
ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ ရခိုင်မြောက်ပိုင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ၂ နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ ဘွယ်နဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ နောက် နောက်ဆက်တွဲ နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေအတွင်း သေဆုံးခဲ့ရ သူတွေအတွက် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ ထောင်ချီ စုဝေးခဲ့ကြပြီး မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းခဲ့ကြသလို နေရပ်ရင်ြး ပန်နိုင်ရေးနဲ့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေအတွက် တရားမျှတမှုရရေး တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ ၂ နှစ်ပြည့် အောက် မေ့ဘွယ်ဆုတောင်းပွဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကTalk to Us ဆိုတဲ့ Going Home Campaign ကနေ တ ဆင့် မိမိတို့ရဲ့နေရပ်ရင်း ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာ ပြန်နိုင်ရေးနဲ့ နေရပ်ပြန်ရင် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံ သားအခွင့်အရေးတွေ အပြည့်အဝ ရနိုင်အောင် ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာ-ဘင်္ဂလား နှစ်နိုင်ငံအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်း တောင်းဆိုကြပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မဆုမွန်က ပြောပြပေးပါမယ်။
Labels: 2019, Genocide Day, mm, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဗွီအိုအေ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ ခေတ်သစ်ထွက်မြောက်ရာ နယ်မြေ ဖြစ်နေဟု ဘုန်းတော်ကြီးမောင်ဘိုပြော
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ကော့ဆက်ဘဇားက ရိုဟင်ဒုက္ခသည်စခန်းကို ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ကာဒီနယ် ချားလ်စ် ဘို ကို ၂ဝ၁၉ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် Photo: Caritas Bangladesh
အာရှကက်သလစ်သာသနာပိုင်ချုပ်များ ဖယ်ဒရေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကက်သလစ် သာသနာ ပိုင်ချုပ် ဘုန်းတော်ကြီး ချားလ်မောင်ဘို ဦးဆောင်တဲ့ ရိုမန်ကက်သလစ် သာသနာပိုင်ချုပ် ဆရာတော်တွေ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့ကနေ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့အထိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို သွား ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမြန်မာနယ်စပ်က ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို သွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ ကက်သလစ်သတင်းဌာန Crux က မနေ့က ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ချားလ်မောင်ဘို, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဖာဒါဒေါမ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်း သွားရောက်
(သတင်းဓာတ်ပုံ - ဦးမောင်မောင် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်)
မြန်မာနိုင်ငံက နေရပ်ရင်းတွေကို ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လာရင် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးပြီး လုံခြုံ
ရေး အာမခံချက်ပေးဖို့ အပါအဝင် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် စခန်းကို ဒီကနေ့ ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေက တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ထွက်ပြေးသွားကြသူတွေ နေရပ်ပြန် လာနိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အရှိန်မြင့်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို သွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် မဆုမွန် ဆက်ပြောပြပေးပါမယ်။
Labels: 2019, mm, Mr. Delwar Hossain, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း, ဦးမြင့်သူ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအရှေ့တောင်ဘက် နယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ လူဦးရေအလွန်ထူထပ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် စခန်း တွေမှာ ဧပြီလကတည်းက မုတ်သုံမိုး ပြင်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၁၀ ဦးသေဆုံးပြီး တဲအိမ်ပေါင်း ထောင်နဲ့ချီ ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ တာဝန်ခံ အရာရှိတွေက မနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဗွီအိုအေ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, မုတ်သုန်ဒဏ်, သတင်း, သေဆုံး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး ဒုက္ခ သည်စခန်းများကို သွားရောက်ကြည့်ရှု
တရုတ် သံအမတ်ကြီးသည် အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအသင်း (ARSPHR) ဥက္ကဋ္ဌ မိုဟစ် အူလာ အပါအဝင် ရိုဟင်ဂျာ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည် / Supplied
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး Zhang Zuo သည် အင်္ဂါနေ့က ကော့ဘဇားခရိုင်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။
Labels: 2019, mm, တရုတ်သံအမတ်ကြီး, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း, ဧရာဝတီ
စစ်တွေမြို့ရှိ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်း၌ အာဏာပိုင် များက အတင်းအဓမ္မ စစ်ဆေးလျက်ရှိ
စစ်တွေ ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နယ် အုန်းတောကျယ် (ပလောင်ပြင်) ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းသို့ အာ ဏာပိုင်များ ဝင်ရောက်၍ အတင်းအဓမ္မ စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ဇွန်လ (၇) ရက်နေ့ နံနက် (၈) နာရီအချိန်တွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လ.ဝ.က၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ စစ်တပ်၊နယ်ခြား စောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ စ.ရ.ဖ နှင့် စစစ တို့ပါဝင်သည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် စစ်တွေမြို့နယ်၊ အုန်းတောကျယ် (ပလောင်ပြင်) ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ကား (၇) စီးဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး ဒုက္ခသည်စခန်း ကော်မတီဝင် များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Labels: 2019, mm, Rohingya Today, စစ်ဆေး, စစ်တွေ, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှရဲ ပစ်ခတ်၍ ဒုက္ခသည် ပြန်ပေးသမား ၃ ဦး သေဆုံး
နိရဉ္စရာ၊ ဇွန်လ ၇ / ၂ဝ၁၉
ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် ရဲ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးလာသည့် မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည်နေထိုင်ရာ လေဒါစခန်းမှ ပြန်ပေးသမား ၃ ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် မီဒီယာများတွင် သတင်းဖော်ပြသည်။
သေဆုံးသွားသူ ၃ ဦးသည် ဒုစရိုက်လောကသမားများနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသူများ ဖြစ်ကြပြီး ဘင်္ဂလာရဲ တပ်ဖွဲ့မှ ပြန်ပေးဆွဲခံရသည့် တက်ကနက်မြို့နယ် လေဒါ ဒုက္ခသည် စခန်းမှ ကလေးငယ်ကို ကယ်တင်ရန် ပြုလုပ်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ စစ်ဆင်ရေး တစ်ခုတွင် ရဲက ပစ်ခတ်၍ ၎င်းတို့ ၃ ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
Labels: 2019, BGP, mm, ဒုက္ခသည်စခမ်း, နိရဉ္စရာ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း, သေဆုံး
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီး (နိုဝင်ဘာ၊ ၁၅၊ ၂၀
Labels: 2019, mm, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဗွီအိုအေ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း, ရေရှားပါးမှု
ကုလ ကူညီရေးအရာရှိ စစ်တွေ ဒုက္ခသည်စခန်းသွား ရောက်
13 မေ၊ 2019 ၊ မေခ
ကုလသမဂ္ဂ လက်ထောက် အတွင်းရေးမှူးချုပ် Ursula Mueller ရဲ့ ရခိုင်ခရီးစဉ် (United Nations OCHA Myanmar)
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လက်ထောက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်လည်းဖြစ် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ် တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယ ညှိနှိုင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်တဲ့ Ursula Mueller ဟာ မနေ့ကနဲ့ ဒီကနေ့ နှစ်ရက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံသလို ဒုက္ခသည် စခန်း တချို့ကိုလည်း သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အေအေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကြား မကြာသေးခင် ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ သူတို့နဲ့တော့ တွေ့ ခွင့်မရခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။ မစ္စစ်မူလာ ရဲ့ ရခိုင်ခရီးစဉ်အကြောင်း အပြည့်စုံကို မမေခက တင်ပြပေး ပါမယ်။
Labels: 2019, mm, Ursula Mueller, ကုလသမဂ္ဂ, စစ်တွေ, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဗွီအိုအေ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ဘက်ကို ဗဟိုပြုပြီး တနာရီမိုင် ၁၁၀ နှုန်း နီးပါးနဲ့ တိုက်ခတ်မယ့် လေပြင်းဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း Fani ဟာ ဒီသီတင်းပတ်နှောင်းပိုင်းမှာ လူပေါင်း သန်း ၁၀၀ ကျော်နေထိုင်တဲ့ အိန္ဒိယ အရှေ့ပိုင်း Andra Pradesh ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ Odisha ပြည်နယ် တွေမှာ ဝင်ရောက်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာ မိုးသက်လေပြင်းနဲ့အတူ မိုးရေချိန် ၁၂ လက်မအထိ ရွာသွန်း နိုင်တဲ့အတွက် ရေကြီးရေလျှံမယ့် အန္တရာယ်လည်း ရှိနေပါတယ်။
Labels: 2019, Fani, mm, ကုလသမဂ္ဂ, စိုးရိမ်, ဆိုင်ကလုံး, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ မုတ်သုန်ဒဏ်ခံနိုင်ရေး ကုလ ကူညီ
06 ဧပြီ၊ 2019
UNHCR ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Andrej Mahecic
မကြာခင်ကျရောက်လာတော့မယ့် မုတ်သုန်ရာသီ မတိုင်ခင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် Cox’s Bazar ဒုက္ခသည် စခန်းထဲက ရိုဟင်ဂျာတွေကို မိုးလေဒဏ်ကနေ အကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့ သဘာဝဘေးကို ဘယ်လို ကာကွယ် ရမလဲဆိုတဲ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေကို ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အခြား မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က သော ကြာန့ ဂျနီဗာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ တုန်းက အဲဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး အခုလို ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်လာတာလို့ ဆိုပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ကုလသမဂ္ဂ, ကူညီရေး, ဒုက္ခသည်စခမ်း, မုတ်သုန်ဒဏ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, ကော့ဇ်ဘဇား
နော်ဝေဝန်ကြီး စစ်တွေသို့ သွားရောက်မှု မြင်ကွင်းများ
မတ်လ ၂၈ ရက် ၂၀၁၉
နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Dag-Inge Ulstein က မတ် ၂၇ ရက် က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့စဉ်။ဓာတ်ပုံ-ညွန့်ဝင်း/အီးပီအေ စစ်တွေမြို့ဆေးရုံကြီးနှင့် အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်သို့သွားရောက်ပြီး ကျောင်းနှင့်ဆေးပေးခန်းသို့ လေ့လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် IDP သဲချောင်းစခန်းတို့ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် သဲချောင်းရွာအတွင်းမှ ရခိုင်၊ မရမာကြီးနှင့်ဘင်္ဂါလီလူမျိုး အချို့အား တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Labels: 2019, mm, စစ်တွေ, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဝန်ကြီး, သဲချောင်း, နော်ဝေး
သတင်းပေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာတချို့ ကို အာဆာ ဖမ်းဆီးခဲ့။
2019 မတ် 23 ရက်
ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ရေးတပ် ARSA အာဆာဟာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခ သည် တွေ ခိုလှုံရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် စခန်းတွေထဲက ဒုက္ခသည်တွေကို အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီးခေါ်ေ ဆာင် တာ တွေ၊ ထိန်းသိမ်းတာတွေ၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်း သတ်ဖြတ်တာမျိုးတွေ လုပ်နေတယ်လို့ Fortify Rights လူ့အ ခွင့်အရေး ဆိုင်ရာအဖွဲ့ရဲ့ မကြာခင်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါ တယ်။
Labels: 2019, ARSA, mm, Video, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဖမ်းဆီး, ဘီဘီစီ မြန်မာ, ရိုဟင်ဂျာ, အာဆာ
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် မိသားစုတွေကို ငွေသားပေးမည် ဆိုတဲ့သတင်း တရုတ်ငြင်းဆို
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီး Anu သူသား Mohammad Anas ကို ချီထားပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ Cox's Bazar အနီး Balukhali ဒုက္ခသည် စခန်းက သူတို့တဲအပြင်ဘက်မှာ ထိုင်နေပုံ (နိုဝင်ဘာ၊ ၁၇၊ ၂၀၁၈)
ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင် ဒုက္ခသည်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရင် မိသားစုတခုကို တရုတ်နိုင်ငံက ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ပေး မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ် မဟုတ်မှန်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံဘက် ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, တရုတ်, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဗွီအိုအေ, မြန်မာ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ရိုဟင်ဂျာ အရေး မြန်မာဘက်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြစ်တင်
၂၀၁၈ ခု ဧပြီတုန်းက ဘင်္ဂလာျးဒ့ရ်ှဘက်ရောက် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို မြန်မာ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး
မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို နောက်ထပ် လက်ခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေ မရှိတော့ဘူးလို့ ဘင်္ဂလားဒ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ရှဟီဒူဟက်ခ်က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ကြာသပတေးနေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။
နေ့ရပ်စွန့်ခွာသွားတဲ့ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လည်လက်ခံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲတွေမှာ မြန်မာဘက် က လက်တွေ့ လုပ်ရပ်မပါတဲ့ ကတိတွေပေးပြီး ကဖျက်ယဖျက် သဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှု နည်းလမ်း တွေ အသုံးပြုနေတယ်ဆိုပြီး ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ စွပ်စွဲပြော ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ကုလသမဂ္ဂ, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, မြန်မာအစိုးရ, ရိုဟင်ဂျာ
( 31.10.2018 ) မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ
ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စခန်းကို မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ဒီကနေ့ သွားရောက်ပြီး ဌာနေပြန်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းလင်းပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေကတော့ သူတို့ကို ရိုဟင်ဂျာ အဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုရေးနဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရေး အပါအ၀င် စိုးရိမ်ချက်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာဘဲ ဌာနေပြန်ရေး အတွက် ဒုက္ခသည်တွေကြားမှာ အကြီးအကျယ် စိုးရိမ်ချက် ရှိနေတယ်လို့လည်း ကုလသမဂ္ဂ အကြီးအကဲ တဦးက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ မသိင်္ဂီထိုက် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2018, Camp, Interview, mm, Myanmar, ဒုက္ခသည်စခမ်း, ဗွီအိုအေ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း, မေးမြန်းခန်း